Maskaxdu Waa Muruq U Baahan In La kala Jiido W/Q Abdirisak Gelinbacayn | Laashin iyo Hal-abuur
Maskaxdu Waa Muruq U Baahan In La kala Jiido W/Q Abdirisak Gelinbacayn
Human brain flat vector, brain activity, lifting bar weightlifting , creative concept illustration for poster, cover with lettering Train your brain.
Maskaxdu Waa Muruq U Baahan In La kala Jiido
Oraahdan waxan weydiiyey in badan oo dadka ka mid ah, badidood waa ay igu waafaqeen, hase ahaatee qaar ka mid ah waxa ay iigu warceliyeen “The brain is not a muscle. It is an organ” maskaxdu ma ahan muruq waxa weeye xubin/unug. Dabcan oraahdani waa sax, maskaxduna waa xubin (Organ) hase yeeshee waxa ay bahwadaag la tahay murqaha dhanka jimicsiga, tababarka, awood dhiska IWM.
Ka soo qaad in aad igu waafaqsan tahay in maskaxdu muruq tahay, see baad ugu jimcin kartaa maskaxdaada waa su’aal meesha soo gashaye, si aad u heshid jawaabta su’aashan raac ama samee Saddexdan Xirfadood:
Mid mid aan u faalleeyo;
Awoodkar (agility): waa maskax fayow oo ku jirta jir fayow, joogtaynta aad joogtaysid jimicsiga jireed waxa loo badinayaa in aad qodobkaan aad buuxisay boqolkiiba lixdan (60%), hase ahaatee waxa iyana habvoon in aad u dhug lahaato qodobadan soo socda si ay kuugu buuxsanto boqolkiiba boqol (100%).
Ka baaran deg saa’id ah (Meditate)
Laylin hal-abuureed (Creativity exercises): waxana isku deyeynaa 2 qaab si aynu u horumarino hal-abuurkeena:
Samee taxane (Make lists): tusaale ahaan waxad taxdaa 10 fikradood maalin walba, tobankaas fikradood mid mid u falanqey, waxaadna isku daydaa sidii aad mid kasta u kobcin lahayd hal-abuurna aad uga samayn lahayd, tani waxa ay kuu fududaynaysaa in maalinba maalinta ka dambaysa aad isbedel la taaban karo ka gun gaartid.
Xujooyin xisi ah (Logical puzzles): xujooyinka ku dhisan logic-ka ama xisiga sida (Halxiraale, googaalaysi, xujo xisaabeed iwm.) waxay kaa saacidaysaa in aad ku dul fekertid maskaxdiina ay shaqayso dabadeednato koboc samayso maalinba maalinta ka dambaysa.
Akhris samayn (Read books): waxaad badisaa akhrinta buugta sida buugaagta ka hadasha sayniska, horumarinta aadanaha, guulaystayaasha iyo wixii kaloo la hal maala, ugu yaarana waxad isku daydaa in aad bishiiba hal buug oo keliya aad akhrisid sandkii waa 12 buug waa hubaal in hal-abuurnimadaadu samayn weyn yeelan doonto.